China Light Blue B113 / Opaque light B102 / Ford blue B118 / Ocean blue B105 orinasa sy mpanamboatra | Baizan
Telefaona: 86-0576-83172982 2983
Ford manga pvb
Pvb manga maivana
Pvb volontany antonony
Pvb fotsy vita amin'ny ronono
Opaque manga manga pvb
T101 volontany maivana
Opaque pvb fotsy
Rose mena pvb
Pvb fotsy translucent
Maitso mainty amin'ny pvb maitso maivana
Manga amin'ny pvb mazava
Maitso amin'ny pvb mazava
Manga manga mavomavo manga pvb
Manga manga B113 / Opaque manga B102 / Ford manga B118 / Ranomasina manga B105
Sarimihetsika Baivar pvb loko Baizan ho an'ny fitaratra maritrano
Famokarana> 12000t isan-taona
Loko pvb MOQ> 5000 sq.m.
Fe-potoana fandoavam-bola: TT LC DP
Serivisy aorian'ny fivarotana ： Hanaraka ny valin'ny fanandramana ataon'ny mpanjifa izahay, ary raha misy ny olana dia hojerentsika eo amin'ny tranokala izany.
Fanadio fitaratra fanadiovana fitaratra sy fanapahana sary mihetsika PVB
● Tapaho araka ny tokony ho izy ny vera
● Zahao ny tampon'ny vera ary esory ny diloilo sy vovoka, diovy amin'ny rano fisotro ilay vera.
● Sasao amin'ny rano maloto / rano malemy ilay vera. Kalitaon'ny rano ＜ 30μS, hamafin'ny rano ＜ 10 PPM, 40 40 60 temperature ny mari-pana.
● Rano maina ny vera ary esory tsy ho voaloto izy.
● Sarimihetsika PVB dia tokony hokapaina araka ny habeny lehibe kokoa noho ny 2 ～ 5mm fanampiny noho ny haben'ny fitaratra.
● Efitra fandotoana --- Ny mari-pana amin'ny efitrano fanamainana dia tokony ho 20 ～ 25 ℃, ny hamandoana dia tokony 23% ± 2%, porofon'ny vovoka, tazomy ny milina, tokony hotehirizin'ny mpiasa ny fanamiana miloko, satroka ary ala kely hisorohana ny sarimihetsika PVB tsy ho ao anaty vovoka, mandoto sy volo.
a) Ny mari-pana ambonin'ny vera --- 20 ～ 30 ℃, ny ambony indrindra dia tsy tokony mihoatra ny 40.
b) Ny mari-pana amin'ny sarimihetsika PVB --- 20 ～ 25 ℃.
c) Jereo indray fa milamina ny sarimihetsika sy ny fitaratra PVB ary ny haben'ny fitaratra dia mifanaraka amin'ny haben'ny sarimihetsika PVB.
Fanararaotana mialoha ny fanerena
Banga mangatsiaka sy banga mafana
a) Banga mangatsiaka --- Ny diplaoma fantsom-pamatrarana dia tokony 580 ～ 680mmHg, mari-pana amin'ny 20 ～ 25 ℃, tsindry amin'ny -0.095 ～ -0.1MPa. Manodidina ny 20 minitra ao anaty Pumping Cool Continuous, raha 30 minitra ao amin'ny Pump Pump Cool tsy tapaka.
b) banga mafana --- Ny maripana ambonin'ny vera dia tokony ho 100 surface 120 ℃, maharitra 30 ～ 45 minitra, ny tsindry dia tokony amin'ny -0.095 ～ -0.1MPa. Azo esorina ny vera rehefa mihena hatramin'ny 60 ～ 80 ℃ ny maripana.
● Rolling Exhaust:
a) Termostat voalohany - → Ny mari-pana ambonin'ny vera misy vera misy lamina dia 30 ～ 40 ℃ - → Roller aloha, 5 ～ 8Mpa ny elanelam-potoana, tokony ho 1-2mm ny halaviran'ny roller noho ny hatevin'ny vera voadio - → Termostat faharoa - → ilay vera voahodina ny mari-pana ambonimbony dia 65 ～ 80 ℃, ny tsindry 5 ～ 8Mpa, ny halaviran-tsolika dia 2-3mm kely noho ny hatevin'ny vera voadio.
b) Tazomy ny hafanana termostat amin'ny asa mitohy.
Fametrahana fanerena avo
Ny maripana sy ny fiakaran'ny tsindry dia haingam-pandeha ambany mandritra ny fomba fanao manontolo. Ny fomba etsy ambany raha hanovozan-kevitra:
Atsangano ny mari-pana sy ny tsindry - → Miakatra hatramin'ny 60 ℃ ny maripana, hatramin'ny 0.4MPa— → Ny fanerena hatramin'ny 0.8MPa, ny mari-pana ka hatramin'ny 90 ℃ - → Ny tsindry mankany 1.0MPa ,, ny maripana hatramin'ny 135-140 ℃ - → Atsangano ny mari-pana ka hatramin'ny 1.05 ～ 1.28 MPa— → Tazomy ny mari-pana 30 ～ 60 minitra (miankina amin'ny hatevin'ny vera sy ny habetsany) - → Tazony ny tsindry, mampihena malalaka ny mari-pana hatramin'ny 90 ℃ - → Mihena ny maripana hatramin'ny 45 ～ 55 ℃, avoaka ny rivotra
Sehatr'asa fampiasana ny mpanjifa
Manaraka: N-UV PVB
Architecture Pvb Film
Maitso amin'ny mazava C102
Sarimihetsika pvb hafanana manaporofo ny hafanana
Yellow Y101 / Opaque mavo Y102
White translucent M104 / Milky fotsy M102 / Op ...
Iza isika Ve?
Niorina tamin'ny taona 1999, nandritra ny taona maro nivoarana, Baizan dia nanangana kolotsaina orinasa tsy manam-paharoa izay misy rafitra fitantanana henjana, mpisava lalana mitohy, laza maharitra, fahafaham-po ny mpanjifa, ary politika mandresy. Mandritra izany fotoana izany, manana zotom-po izahay…
Aiza no mitady anay?
No.50 Xiyuan Road ， Zone Industrial Industrial Keshan Andrefana Ti Tià, Zhejiang ， Sina
Ho an'ny fangatahana momba ny vokatra na pricelist anay dia mba apetraho aminay ny mailakao ary hifandray izahay ao anatin'ny 24 ora.